I-Huawei Mate 20X: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
Umnyhadala wentetho yeHuawei usinika okuninzi. Ukongeza kwi-Mate 20 kunye neMate 20 Pro, umenzi waseTshayina usishiya nenye ifowuni enomdla omkhulu. Le yiHuawei Mate 20X, ifowuni yokudlala. Kwakungekho ekuqaleni kwale nyanga de kwaziwa malunga nobukho bayo, enkosi kwividiyo encinci uphawu lwayo olwalufakwa kunxibelelwano lwasentlalweni. Yifowuni yokuqala eyaziswa yinkampani ngeli candelo.
Phakathi kowe-2017 nowama-2018 sibone i Ukukhula okuphawulekayo kwicandelo lokudlala le-smartphone. Ibango layo liyonyuka kwaye ngakumbi nangakumbi iimveliso zazisa iifowuni zazo ngaphakathi kuyo. Ngoku, le Huawei Mate 20X yeyokugqibela ukujoyina eli candelo. Kwaye kuza kunika imfazwe eninzi.
Ifowuni sele ihanjisiwe ifomu esemthethweni kulo msitho wophawu lwesiTshayina eLondon. Ke sele sizazi iinkcukacha ezizeleyo zobuchwephesha kwifowuni yomdlalo waseTshayina. Yintoni esinokuyilindela kwesi sixhobo?
1 Iinkcukacha zeHuawei Mate 20X
2 I-Huawei Mate 20X: Ukubheja kweHuawei kwimidlalo
Iinkcukacha zeHuawei Mate 20X
Sijongene nesiphelo esenzelwe ukuyidlala, ke amandla kunye nokusebenza kakuhle zizinto ezimbini eziphambili kuyo. Kuba kufuneka isinike ithuba lokudlala eyona midlalo inzima. Ngethamsanqa, oku kuya kuba nakho ukubulela kwifowuni, ekwanekhamera engasemva kathathu esiyibonayo kulo lonke uluhlu. Oku kukucaciswa okupheleleyo kweHuawei Mate 20X:
Ukubalulwa kobugcisa iHuawei Mate 20X
Umzekelo Umlingane 20X
Isikrini I-7.2-intshi ye-OLED ene-2.244 x 1.080 isisombululo sepixels kunye ne-18.7: 9 ratio
Inkqubo IHuawei Kirin 980 ene-NPU ezimbini ezitshixelwe kwi-2.6 GHz
Ikhamera esemva I-40 MP ƒ / 1.8 i-angle ebanzi + i-20 MP ƒ / i-2.2 ephezulu kakhulu ye-angle + 8 MP ƒ2.4 ifowuni
Ikhamera yangaphambili MP engama-24 ene-f / 2.0 ukuvula
Conectividad I-GPS yeBluetooth 5.0 ye-USB yohlobo C lwe-Wifi ac
Ezinye izinto Ukupholisa kwigumbi lomphunga le-NFC ngasemva kokufunda ngomnwe wokuvula
Ibhetri I-5.000 mAh ngokutshaja ngokukhawuleza i-40W
Ixabiso 899 euro
I-Huawei Mate 20X: Ukubheja kweHuawei kwimidlalo
Sijongene nefowuni enkulu kwikhathalogu yohlobo lwesiTshayina. Isixhobo esinesikrini se-7,2-intshi. Umgangatho wesikrini sayo umi kakuhle, kwaye iphaneli ye-OLED lukhetho olukhethwe ngumenzi. Nangona oku kubalulekile kuthathelwa ingqalelo ukuba yifowuni eyilelwe ukudlala imidlalo, sifuna umgangatho omkhulu womfanekiso ngalo lonke ixesha kwisixhobo. Ngale ndlela, i-Huawei Mate 20X ithembisa ngaphezulu kokuhambisa. Isikrini sinotshi emile njengokwehla kwamanzi, njengaleyo kwi-Mate 20.
Enye yezona zinto zibalaseleyo kwifowuni bubukho besitayile. IHuawei Mate 20X ine-M-Pen, njengoko umenzi wayo eyibhaptize. Inguqulelo yayo yesitayile, eya kuthi ivumele abasebenzisi ukuba benze imisebenzi eyahlukeneyo. Nangona le stylus kuyakufuneka ithengwe ngokwahlukeneyo, kulindeleke ukuba ibe nexabiso malunga nee-euro ezingama-70.
Njengazo zonke iziphelo eziphezulu, ukubheja kwiprosesa yaseKirin 980. Yiprosesa emele amandla ayo, ukusebenza kakuhle kunye nokusetyenziswa kwamandla asezantsi. Umdlalo ofanelekileyo kwifowuni ekufuneka isebenze ngokusemgangathweni ngamaxesha onke. Iphucula kakhulu kwiiprosesa zangaphambili zenkampani, kunye nabasasazi kwimarike.
Ibhetri yenye yezinto eziphambili kule fowuni. Isixhobo sibonisa ibhetri enkulu ye-5.000 mAh, Okuza kuthi ngaphandle kwamathandabuzo kusinike inkululeko enkulu ngalo lonke ixesha. Kubalulekile xa udlala imidlalo, edla ngokuba ngumsebenzi odla amandla amaninzi kwiifowuni ze-Android. Ngokufana ne-Mate 20 Pro, sine-40W inkqubo yokutshaja ngokukhawuleza efumaneka kwifowuni. Oku kuyasivumela ukuba sibize i-30% yebhetri yayo kwimizuzu engama-70.
Kwakhona, kufanele kukhankanywe inkqubo yegumbi yokupholisa, eya kuthintela ifowuni ekufudumezeni xa udlala imidlalo emininzi yokusebenzisa izixhobo kwifowuni. Le nkqubo ibizwa ngokuba yiSuperCool ngumenzi waseTshayina. Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kuyo, ke ukusebenza kakuhle kulindeleke kule nkalo.
Zonke ezinye iinkcukacha, njengoko ubona, zizinto esizifumana kwi-Mate 20 Pro iboniswe ngale mvakwemini. Ke banemiba embalwa efanayo, nangona esi sixhobo sijolise ikakhulu kubadlala umdlalo, kunye nophuculo oluthile kumqhubekekisi ukunika ukusebenza okungcono. Yeyona nto ibhendi yakhe yokuqala yokungena kweli candelo ngale ndlela. Ayililo elinye leqela, kuba iMidlalo yokuHlonipha esungulwe kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kwintengiso.
Ukungabikho kwe-3.5 mm jack kwifowuni bafuna ukubuyekeza ngezithethi zestereo. Ziya kukhala zombini ezantsi nangaphezulu kwefowuni. Umbono osemva kwabo kukubonelela abasebenzisi ngamava okuntywila ngawo onke amaxesha ngelixa bedlala.
Emva kokubona iinkcukacha zomnxeba, kuya kuhlala kusazi okungakumbi malungaIxabiso eliza kufika ngalo ezivenkileni kunye nomhla eliza kuthi ngawo lifike. Singacinga ukuba le Huawei Mate 20X ayisayi kuba sesona sixhobo sitshiphu kwikhathalogu yohlobo lwesiTshayina. Njengazo zonke iimodeli, ukumiliselwa kwayo kulindeleke kule nyanga.
Iya kuba ngo-Okthobha u-26 xa iHuawei Mate 20X ibetha iivenkile ngokusemthethweni. Ke ngeentsuku nje ezili-10 ungathenga isiphelo esiphezulu sokudlala ngokusemthethweni eSpain. Olunye uthandabuzo oluphambili kuye wonke umntu lixabiso eliza kuba nalo, elityhilwe ngumenzi waseTshayina.
Kulindeleke ukuba ifike eSpain ngexabiso lama-euro angama-899. Ngokwamaxabiso, ibekwe phakathi kolu luhlu, phakathi kwe-Mate 20 kunye ne-Mate 20 Pro.Ngokumalunga nemibala, sinokuyithenga ngesilivere kunye ne-lilac, leyo yimibala esinokuyibona kumfanekiso ongentla . Ke kuyakufuneka sibone ukuba abathengi eSpain bayasifumana njani esi sixhobo. Ucinga ntoni ngale fowuni yokudlala yeHuawei?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » I-Huawei Mate 20X: Imidlalo yokudlala yeHuawei